जनप्रतिनिधिसँग प्रचण्डले भने– अनि जनताले किन पत्याउने ? - Everest Dainik - News from Nepal
जनप्रतिनिधिसँग प्रचण्डले भने– अनि जनताले किन पत्याउने ?
चितवन, असोज ८ । नेकपाका अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रचण्डले विकास र समृद्दिको अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
चितवन जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको उदघाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसके जनताले भविष्यमा नपत्याउने बताए ।
“अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीले जितेको छ । प्रतिपक्षले पनि विकासका काममा हाम्रो अवरोध हुँदैन भनेको छ ।” प्रचण्डले भने, “यस्तो अवसर हुँदा समेत हामीले केही गर्न सकेनौं भने यदि हुँदा पनि गर्न सकेनौं भने भोली गएर हामीले गर्न सक्छौं भनेर भाषण गर्दा पत्याउने स्थिति हुँदैन । अनि किन पत्याउने जनताले ?”
अध्यक्ष प्रचण्डले हरेक स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता छुट्टयाएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रचण्डले भने, “हरेक स्थानीय तहको एउटा भिजन हुनुपर्यो । कहाँ, के कस्तो सम्भावना छ, श्रोतको अवस्था के छ ? आवश्यकता के छन् भन्ने कुरा प्राथमिकताका आधारमा विश्लेषण गरेर यो वर्ष यो योजना सम्पन्न गर्ने, अर्को वर्ष यो गर्ने भन्ने कुरा जनतालाई पनि थाहा दिनुपर्यो ।”
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘१० महिना सहयोग गर्नुभयो धन्यवाद !’
पूर्वाधारको विकास नै अहिलेको मुख्य काम भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वाधार निर्माणमा पनि वार्षिक कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । सिँगै जिल्लाको एउटा योजना र स्थानीय तहको पनि योजना बनाएर जान सके परिणाममुखी काम गर्न सकिने उनको जिकिर थियो ।
चितवन जिल्लामा सडक सञ्जालको बिस्तार र स्तरोन्नती, तटबन्ध लगायतका मुद्दाहरु हल गर्नुपर्ने बताउँदै प्रचण्डले हुलाकी मार्ग भारतले बनाउने भएपनि ढिला भएपछि त्यसका लागि कम्तीमा रकम निकासा गर्ने वातावरण बन्दै गएको बताए ।